आईतवार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ? यहाँ उल्लेख गरिएको गुण मिलो कि मिलेन हेर्नुस् ! – Chautari Online
आईतवार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ? यहाँ उल्लेख गरिएको गुण मिलो कि मिलेन हेर्नुस् !
October 25, 2020 429
आइतवार जन्मेका व्यक्तिमा प्रशस्त उर्जा तथा कन्फिडेन्ट पावर प्रशस्त हुन्छ । सकारात्मक सोचकै कारणले जीवनमा प्रगतिपथमा लम्किरहेका हुन्छन् । अरुको भावना तथा संवेदनालाई सजिदै बुझ्ने हुँदा दयालु हुन्छन् तर कहिलेकाही क ठोर निर्णय लिन पनि पछि पर्दैनन् । देखेको कुरा भनिहाल्ने र धेरै दिनसम्म मनमा कुरा खेलाएर बस्न नसक्ने स्वभाव हुन्छ । धर्म तथा अध्यात्ममा विशेष राख्ने हुनाले धार्मिक यात्रा गरिरहन्छन् ।
आइतवार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै जसो प्रेम विवाह गर्न रुचाउँछन् । आँटिला शाहसी तथा पराक्र मी भएका कारणले प्राविधिक पेशा व्यवासायमा अब्बल हुन्छन् । विशेष गरेर राजनीति,डाक्टर,पाईलट,विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा जबरजस्त पहुच स्थापित गर्दछन् ।
Nextचाणक्य नीति : यी ५ गुण भएका व्यक्ति कहिल्यै असफल हुँदैनन्